Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Weed မူးယစ်အထူးကုဆရာဝန်က အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်
Weed မူးယစ်အထူးကုဆရာဝန်က အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်
အသက် ၁၉ ပါ ကျားပါ မူးယစ်ဆေး ရာမ နဲ့ weed ကို အချိန်ကြာကြာသုံးစွဲးခဲ့ပါတယ် ဆေးသုံးရင် စိတ်ဖောက် ချင်သလိုဖြစ်တာနဲ့ အားလုံးကို ဖြတ်လိုက်တာ ၄လရှိပီးအခုအခြေနေက စိတ်က တခါခါဆိုလွတ်သွားချင်တယ် အသိနဲ့ပြန်ထိန်းနေရတယ် နောက်ပီးအမြင်အာရုံတွေမကောင်းတောဘူး ခဏခဏသန်းနေတယ်ဆရာ ကားမောင်းလို့တောင် အဆင်မပြေတော့ဘူး မနက်အိပ်ယာနိုးလည်းမလန်းဆန်းဘူး တနေ့လုံး နုံးနုံးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ် ကြည့်နေရတယ် အထူးကုဆရာနဲ့ပြကြည့်တော့ Depres-x sertraline 50mg တနေ့တခြမ်း၆ လသောက်ခိုင်းပါတယ် အခုဆို သောက်လာတာ ၃လရှိပီး ခုထိမကောင်းသေးပါဘူးဆရာ ကျေးဇူပြုပီး ဆရာဘယ်လိုကုသရမလဲ ပြောပြပေးပါနော် တကယ်အနေခက်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဆရာ
ဆောရီး။ မူးယစ်အထူးကုဆရာဝန်က အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်။ စာတွေ ဘလော့မှာရှိတယ်။
1. Amphetamines (1) ယာဘ-ရာဘ-ရာမ-ယာမ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/amphetamines-1.html
2. Amphetamines (2) ရာမ ဇာတ်လမ်းတခု http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/drugs-used-in-military.html
3. Amphetamines (2) ရာမ ဇာတ်လမ်းတခု http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/drugs-used-in-military.html
4. Amphetamines စိတ်ကြွဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/amphetamines.html
5. Amphetamines စိတ်ကြွဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/amphetamines.html
6. Burundanga ပဒိုင်းပွင့်လိုဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/burundanga.html
7. California nuns fight ban on marijuana businesses ဆေးခြောက်နှင့် သီလရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/california-nuns-fight-ban-on-marijuana.html
8. Carfentanyl ဆင်ဖြူတော် မူးယစ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/carfentanyl.html
9. Common Medicines you really shouldn’t mix with Alcohol အရက်နဲ့တွဲရန်မသင့်သောဆေးများ
10. Cough Syrup Addiction ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးစွဲခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/cough-syrup-addiction.html
11. Drug Abuse ဆေးဝါးတလွဲသုံးခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/drug-abuse.html
12. Drugs and politics ဆေးတန်ခိုးနဲ့ ဟီးရိုးဖြစ်နိုင်တယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/drugs-and-politics.html
13. Drugs used in the military စစ်သုံးဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/amphetamines-2.html
14. Ecstasy Drug Tests စိတ်ကြွဆေး ဆေးစစ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/ecstasy-drug-tests.html
15. Ecstasy စိတ်ကြွဆေးများ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/ecstasy.html
16. High မူးယစ်ဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/high.html
17. Ice ဆိုတာ ရေခဲမဟုတ်ပါ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/ice.html
18. Inhalant abuse လမ်းဘေးဆေးရှူ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/inhalant-abuse.html
19. Marijuana addiction ဆေးခြောက်က စွဲသလား https://doctortintswe.blogspot.com/2017/09/marijuana-addiction.html
20. Marijuana ဆေးခြောက် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/marijuana.html
21. Methadone မက်သဒုံး https://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/methadone.html
22. Methamphetamine (မက်သမ်ဖတမင်း) http://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/methamphetamine.html
23. Military and Crystal Meth စစ်တပ်နဲ့ စိတ်ကြွဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/military-and-crystal-meth.html
24. Molly လူငယ်တွေ သုံးနေကြတဲ့ စိတ်ကြွဆေး မော်လီဆေးပြား ပိုဆိုးဝါး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/molly.html
25. Opium ဘိန်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/opium.html
26. Pseudoephedrine (ယာဘ) ကို ဒါကနေလုပ်တယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/pseudoephedrine.html
27. Yaba ယာဘ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/yaba.html